Ikamelo elincane, i-Old Town, imizuzu engu-3 ukuya esiteshini sase-Bern - I-Airbnb
Ikamelo elincane, i-Old Town, imizuzu engu-3 ukuya esiteshini sase-Bern
Bern, Canton of Bern, i-Switzerland
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Kai
Igumbi elithule elincane labantu abangu-1-2 efulethini lesimanje esakhiweni esinomlando khona kanye enhliziyweni ye-Bernese Old Town. Imizuzu emi-3 ukuya esiteshini sesitimela esikhulu saseBern, imizuzu emi-2 ukuya esakhiweni sephalamende saseSwitzerland kanye nezindawo ezibaluleke kakhulu, iminithi elingu-1 ukuya ezitolo, izindawo zokudlela ezahlukahlukene kanye nayo yonke impilo yasebusuku yaseBernese .. futhi ngasikhathi sinye imizuzu emi-5 kuphela phansi emfuleni i-Aare noma eBern's Botanical Garden. Amathikithi ezithuthi zomphakathi zamahhala eBern afakiwe.
* Ukulala Nokuphila: Igumbi lesimanjemanje, elithulile linombhede wendlovukazi ongu-160cm, ideski, okokugqoka okunesibuko kanye nendawo yokubeka izingubo. Igumbi libheke enyakatho ngasegcekeni elingaphakathi, futhi izimpumputhe zangaphandle ziqinisekisa ubusuku obumnyama ngokuphelele. Igumbi line-TV engu-43 inch HD ene-akhawunti ye-Netflix.
* indawo emaphakathi enhliziyweni yeDolobha Elidala laseBernese (“Umuhle kunawo wonke esake sawabona”, uJohann Wolfgang von Goethe wabhala ngoBern encwadini ayibhalela intombi yakhe)
* Ifulethi lisesitezi sesi-3 sesakhiwo esihle somlando. Yavuselelwa ngokuphelele ngo-2017 futhi ine-flooring yokhuni ye-parquet enokushisa okungaphansi. Ngaphandle kwekhishi elincane, elivamile (isitofu/ihhavini, ihhavini le-microwave, ifriji, ifriji, umshini wokugeza izitsha) kanye negumbi lokugezela elivamile kunamagumbi amabili okulala akhiyekayo.
* Ngaphandle kwegumbi elinikezwe lapha, leli fulethi linegumbi elilodwa ngaphezulu labahlali abangu-1-4.
* I-WiFi, ikhofi kanye netiye kufakwe enanini lekamelo
4.73 · 478 okushiwo abanye
I-SUPER CENTRAL, IPHEPHILE
Indawo emaphakathi ngokuphelele endaweni yabahamba ngezinyawo khona kanye enhliziyweni yeBernese Old Town. Isiteshi sesitimela esikhulu saseBern, izindawo zokudlela ezahlukahlukene, amathuba amaningi okuthenga, amasinema, kanye nayo yonke impilo yasebusuku yaseBernese ilinda emnyango wakho ngebanga nje eli-1 kuye kwemi-3 lokuhamba. Izindawo ezidume kakhulu, ezihlanganisa iphalamende laseSwitzerland, i-clocktower 'Zytglogge' noma iBernese Münster (cathedral) nazo zikude ngomzuzu owodwa kuya kwemi-3. Futhi ngisho ezansi ekuthuleni komfula i-Aare noma eBernese Botanical Garden kuwuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela.
Igumbi lakho liphakathi nendawo yezitolo ebaluleke kakhulu yaseBern. Futhi, kunezitolo ezinkulu ezahlukahlukene (iMigros, iCoop, iDenner) emizuzwini eyi-1 kuye kwengama-5 kuphela ukusuka efulethini. Ngenxa yokuba seduze kwesiteshi sesitimela esikhulu, ungenza igrosa yakho nsuku zonke (ngisho nangamaSonto) ngisho nangemuva kwesikhathi kuze kube ngu-11pm.
Ngithanda ukukunikeza amathiphu futhi ngizokujabulela ukuphendula noma yimiphi imibuzo ezayo ongase ube nayo.Ngaphezu kwalokho, uma isikhathi sivuma, ngithanda ukukhuluma kancane. Ngaphandle kwalokho angiqondile ukukuhlupha kakhulu ...ngaphandle uma ufuna ngikwenze.
Ngithanda ukukunikeza amathiphu futhi ngizokujabulela ukuphendula noma yimiphi imibuzo ezayo ongase ube nayo.Ngaphezu kwalokho, uma isikhathi sivuma, ngithanda ukukhuluma kancane.…